I-China HY280 isantya esiphezulu sebhedi enye yomvelisi kunye noMthengisi | UAoyuan
Uhlobo oluvulekileyo olukhawulezayo lwe-cam lokujija-ingalo yokudibanisa intonga, ukusebenza ngokulula kunye nokusetyenziswa okubanzi.
Isebenzisela i -.knit iintlobo ezahlukeneyo zomnatha wezolimo, umzekelo umnatha wokuloba ongenamaqhina, ilaphu le-chemical fiber net, ikhethini le-louver lekhethini, ukhuseleko lomnatha kulwakhiwo, umnatha womnquma, umnatha wengcongconi, umnatha wezemidlalo kunye nelaphu lokuluka.
Uhlobo oluvulekileyo olukhawulezayo lwe-cam lokujija-ingalo yokudibanisa intonga, ukusebenza ngokulula kunye nokusetyenziswa okubanzi. Ukusebenza okuphezulu kwenaliti enye ye-Raschel warp umatshini wokuluka uye waphuhliswa kwiintlobo ezininzi zamalaphu ezinje ngenetha lokuloba, umnatha wokukhusela, umnatha we-shading kunye ne-purse net., Kunye ne-sheet-like creel yentsimbi ye-monofilament okanye i-creamping creel ngentambo yesiqwenga yesiqhelo.
Inaliti yenaliti (inaliti inokuxhonywa ebhedini kwibhloko okanye ifakwe ngokwahlukeneyo)
Inani lemivalo yesikhokelo
I-2 roller ene-friction drive
4 izileyi kunye zochuku drive iziko shaft drive
I-2 roller ene-friction drive, ukuma ngokwahlukeneyo
Shaft esembindini iqhutywa. ngokwahlukeneyo-emi
Ukuhamba rhoqo kwesantya esiguqukayo
Amandla emoto 5.5kw 7.5kw 15kw
(ubude * ububanzi * ukuphakama) (mm)
Umgangatho womatshini ongenanto (m2)
Amandla amakhulu (kW)
isantya (r / m)
Ngaphandle koomatshini bokukhonkxa abambalwa be-simplex, uninzi loomatshini bokuluka bebhedi ephindwe kabini ngoomatshini beenaliti zolwimi lweRaschel okwangoku, kwaye iinaliti ezinemiphunga zisetyenzisiwe kule minyaka idlulileyo.
Inaliti ephothiweyo umatshini wokuluka weRaschel ekuqaleni wawenziwe ukuba uvelise ilaphu elinamacala amabini elinelaphu elinesakhiwo sebambo esifana nokunitha. Ke ngoko, iinaliti ngaphambili nangasemva iibhedi ezimbini zenaliti zomatshini wokuqala wenaliti kabini zazimiswa ngamaxesha athile. Nangona kunjalo, ukuze yenze kube lula ukuba ibha yekama ijikeleze ngapha nangapha, yakhawuleza yatshintshwa yangqengqa ngaphambili nangeebhedi zenaliti, kwaye iinaliti zalungiswa zabuya umva. I-7 z $ n- q%] t1 x
Umphambili kunye nomva kwebhedi yenaliti yokuluka umatshini wokuluka ziphantse zalingana. Iseti yemivalo yeekama ilungiswe ngaphezulu kweebhedi ezimbini zeenaliti. Ngaphambili nangemva kweebhedi zenaliti, ipleyiti emise okokulinganisa (okanye ipleyiti yenaliti) kunye nebhedi yesinki zilungelelaniswe ngokulandelelana. Ke ngoko, umahluko phakathi umphambili kunye nomva kumatshini umiselwe sisikhundla sokutsala kunye nokubopha indlela. Icala apho kukho indlela yokuthabatha liphambi komatshini.
Egqithileyo HY288 Warp Ukunitha Machine
Okulandelayo: HY282 series kabini inaliti ukhuko Warp ukunitha umatshini
HY282 series inaliti kabini inalufa Warp ukunitha ma ...